Izipho ezilungileyo zeValentine yetekhnoloji | Iindaba zeGajethi
Izipho ezilungileyo zeValentine yetekhnoloji
UMiguel Hernandez | 07/02/2021 10:00 | ngokubanzi
Njengoko sihlala silapha ukuza kuthi ga ngoku ndikuncede ngale mihla yokuthenga inomdla, kwaye uSuku lweValentine lolunye lwale mizuzu ilungileyo yokunika njengezipho. Senze ingqokelela encinci yento esikholelwa ukuba zizipho ekufuneka zikho xa ungumthandi wetekhnoloji okanye ufuna ukubonisa iqabane lakho ukuba umthanda kangakanani.
Yenzelwe oko Sikuzisa izimvo ezininzi zesipho ngoSuku lweValentine yetekhnoloji. Ungaphoswa kukuba zonke iimveliso zinetywina lethu lokuvunywa ukuba ziimveliso ebesizihlalutya ngaphambili kwaye zisinike iziphumo ezihle.
1 Ukuphucula nge-teleworking
2 Ukuqala kwiKhaya eliDibeneyo okanye kwiKhaya eliSmart
3 Imultimedia kunye nokuzonwabisa
Ukusebenza ngomnxeba sele kuqalile ukuba yinxalenye yemihla yethu yimatshi ngokunyanzelwa, uninzi lwenu lusenokungabi nawo "umsebenzi" ekhaya olungiselelwe zonke iimfuno ezinokuthi zifune into enje. Ukuba ujonga into efikelelekayo, siqala ngekhibhodi engenazingcingo ye-ODY kunye nepakethi yemouse kwiTrust.
Iimpuku zentembeko kunye neebhodi yezitshixo zomsebenzi wonxibelelwano, ngaba kufanelekile?
Nge- € 24,99 kuphela unokufikelela kwinkqubo efanelekileyo, njengekhibhodi, Sifikelela kwi-13 yezitshixo ezichaziweyo kwangaphambili kuzo zombini iOfisi yeMicrosoft kunye nolawulo lwemultimedia. Ngaphaya koko, ikhibhodi ikwangumngcipheko wokuphalaza ngelixa imouse ithe cwaka kakhulu. Zombini ziqhagamshelwe kwizibuko elinye le-USB.
Ikhibhodi kunye nepakethi yemouse ODY ngeTrust> ZITHENGA
Ukuba ufuna enye into yePremiyamu, siya ngqo kwikhibhodi efanelekileyo esakha sazama ukuza kuthi ga apha kwiwebhusayithi yethu nakwitshaneli yethu. Sithetha ngeLogitech Craft.
Kucacile ukuba asijonganga nemveliso enexabiso eliphantsi, kwaye yeyona bhodi yezitshixo ehlengahlengiswe ngakumbi kwimeko yobuchule esiya kuyifumana kwintengiso. Okwangoku iyathengiswa nge-115,90 euro kwiAmazon. Ngaphandle kwamathandabuzo, isithembiso silunge ngakumbi kwaye umgangatho wemveliso uyazithetha.
ILogitech Craft ngexabiso elifanelekileyo> ZITHENGA
Ukubeka iliso nako kunokuba yinto efanelekileyo yokunyamekela ukubona kwamehlo kunye nokuphucula imveliso yethu, ke Sincoma iPhilips 273B9, eyenye yokugqibela esaye sayvavanya kwaye sigxile ikakhulu kweli candelo.
IPhilips 273B9, iliso elonyusa ukusebenza kwefowuni [Uhlalutyo]
Ukuba sijonga ukuba isebenza njenge-USB-C HUB, ebonelela ngexabiso le-60W kwilaptop kwaye ene-SmartErgoBase, Kubonakala ngathi kutyalomali olungaphezulu kokulungileyo. Kunzima ukufumana ezinye iimonitha ezinezi mpawu kunye nexabiso eliphakathi elinakho ukuhlangabezana neemfuno zomsebenzi wefowuni.
IPilips 273B9 iliso> ZITHENGA
Ukuqala kwiKhaya eliDibeneyo okanye kwiKhaya eliSmart
Ayisoze ibe lixesha elibi lokuba uqalise kwiKhaya eliSmart ngothotho lweemveliso ezihambelana ne-IoT. Ngokucacileyo kule meko ukumisa kwethu okokuqala kuya ngqo kwiAmazon Echo entsha.
Kubonakala kum njengeyona ndlela ingcono yokuqala, kuba kunoko i-Echo Dot ibonakala ngathi iyandincedisa koku. IAmazon Echo kunye neZigbee protocol ihamba nezibane zikaPhilips Hue kunye nezinye iimveliso ezihambelana neAlexa banokubenza lula ubomi bakho njengoko sikubonisile kwenye yeevidiyo zethu ezenzekelayo ekhaya.
I-Amazon Echo> ZITHENGA
Iimveliso zeSistem yamandla eyilelwe ikhaya elinobuhlakani zihlala zisikhapha kwiwebhusayithi yethu kwaye ayinakuba mbalwa kule ndawo ithengiswayo. Eyona ndlela ilungileyo kukuba newotshi yealam, isithethi kunye netshaja ekrelekrele ene-Alexa etafileni yethu, le yiSomlomo eSmart evuka kuhlobo lwaseSpain.
Umgangatho wesandi wanele ukugcwalisa igumbi ngendlela esemgangathweni, uyilo kunye nezixhobo ziphumelele kwaye inani elikhulu lezinto abanazo ziyenza ibe yinto enomdla kakhulu. Ngokunyaniseka, bekunzima kum ukufumana amanqaku amabi kuba azikho izixhobo zokuthelekisa nazo.
Isistim yaMandla eSomlomo eSomlomo ivuke> ZITHENGA
Ngokucacileyo i-IKEA yayizokuntywila kwimveliso kuthi kungekudala okanye kamva kwivenkile yasekhaya exhunyiwe, kwaye inkqubela phambili yayo yamva nje ibintle ngendlela emangalisayo. Apha besinemibala emangalisayo ye-KADRILJ kwaye asonelisekanga.
Unonophelo olukhulu Kungenxa yokuba xa uthenga enye, uya kugqiba ukuyibeka kuyo yonke indlu, ngakumbi ukuba unoluhlu lweemveliso ezihambelana neprotocol ye-Zigbee i-IKEA egcinwe kuyo kwaye ngokucacileyo iyabiza kakhulu kwimarike ngokwexabiso lemali .
UKADRILJ uyimfama evela kwi-IKEA> ZITHENGA
Imultimedia kunye nokuzonwabisa
Siqala ngento engathandabuzekiyo eyona isandi kunye nemveliso yasekhaya esizisebenzisileyo esiyivavanyileyo kwi-2020, enyanisweni Kubonakala kum ngokwemiqathango ngokubanzi eyona mveliso itekhnoloji idlulileyo apha kulo nyaka uphelileyo, sithetha ngeSonos Arc.
I-Sonos Arc kufuneka ibe ngaphandle kwamathandabuzo imbangi yokubetha ngaphakathi kwemivalo yesandi, sinokuguquguquka, isandi soluhlu lweprimiyamu, unxibelelwano kunye neempawu ezikrelekrele. U-Sonos uphinde wazama ii-barbars nge-Arc yayo kwaye baya kuba nzima ukuyimela.
UNonos Arc> ZITHENGA
Ngoku sithetha kancinci ngee-headphone, ukuba ucacile ngokuya kwelona "phezulu", eyona nto siyivavanye ngo-2020 yayiyiHuawei FreeBuds Pro, ngaphandle kwamathandabuzo.
IHuawei FreeBuds Pro> ZITHENGA
Nangona kunjalo, Sifikelele kwimveliso esemgangathweni / yexabiso elungileyo NjengeXellence eyenziwe nguX nguKygo ekwanayo ne-ANC kunye nesandi esimangalisayo.
Xellence ngu X nguKygo, kunye ne-ANC kunye nesandi esimangalisayo
Ngoku siqhubela kwenye imveliso ebonakala ngathi ngathi yeyakudala kwaye ayifanelanga ukuba ilahlekile ekhayeni lakho, ngakumbi ukuba ufuna ukusebenzisa umabonwakude wakho phambili. ICube yoMlilo yeAmazon yeyona mveliso ijikeleze ukuseta iziko lemultimedia elungileyo ekhayeni lakho kunye nexabiso eliphakathi.
Nangona kunjalo, akufuneki ushiye ngasemva kwiAmazon Fire TV Stick, enye imveliso ngexabiso elingenakubambeka elenza okufanayo, kodwa ngamandla amancinci kancinci kwaye ngokucacileyo ngesisombululo esipheleleyo seHD.
Yithenge ngexabiso elifanelekileyo> ZITHENGA
Okokugqibela sicebisa iKobo Nia, enye yee-eReaders ezilungileyo ngexabiso eliphakathi esizijongileyo mva nje. Oku kungquzulwano oluthe ngqo kunye nohlobo olusisiseko lweAmazon esiye saphonononga apha ngaphezulu kwesihlandlo esinye.
Siyathemba ukuba uzithandile iingcebiso zethu zokuthenga ngoMhla weValentine kwaye awulibali ukuba kwiActualidad Gadget sihlala silapha ukukunceda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izipho ezilungileyo zeValentine yetekhnoloji
Uyikhuphela njani iFotoomath yePC yasimahla (inguqulelo yamvanje)
Uyisusa njani i-watermark kwifoto kunye nezi nkqubo